इक्यानको अध्यक्षमा प्रकाश पाण्डे सर्वसम्मत निर्वा्चित
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)को अध्यक्षमा प्रकाश पाण्डे सर्वसम्मत चयन भएका छन्। आइतबार बिहान सम्पन्न १४औँ साधरणसभाले पाण्डेलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन गरेको हो।
नेपाल निर्यात परिषद्को अध्यक्षमा हरिबहादुर कार्की चयन
नेपाल निर्यात परिषद्को अध्यक्षमा हरिबहादुर कार्की निर्विरोध निर्वा्चित भएका छन्। परिषद्को २२औं साधारणसभाबाट कार्की अध्यक्षमा चयन भएका हुन्।
मेगा बैंकद्धारा लुम्बिनी क्षेत्रको मुसहर र नेटुवा बस्तीमा सहयोग
मेगा बैंकले लुम्बिनी क्षेत्रका मुसहर र नेटुवा बस्तीका लागि सहयोग गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत लुम्बिनी विकास मञ्चमार्फत लुम्बिनी क्षेत्रका मुसहर र नेटुवा बस्तीका लागि न्यानो ब्ल्याङ्केट वितरण गरेको जनाएको छ ।
विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्दा सस्तो हुने, तिरेको भ्याट रकमको १० प्रतिशत उपभोक्ताको खल्तीमा जाने
विद्युतीय प्रणालीबाट सामान खरिदको भुक्तानी गर्दा अब सस्तो पर्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय प्रणालीबाट गरिने भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ताको व्यवस्थाको कार्य्विधीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा भिष्मराज ढुंगाना नियुक्त
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भीष्म ढुंगानालाई नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ।
राष्ट्रिय जलस्रोत नीति ल्याइँदै, पूर्वाधार आयोजनाले जलस्रोत संरक्षण सुनिश्चितता गर्नुपर्ने
विकास निर्माणको काम गर्दा जलस्रोत संरक्षणको सुनिश्चतालाई अनिवार्य गर्दै सरकारले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति-२०७६ ल्याउने तयारी गरेको छ।
नक्कली भ्याट बिल र आय करको मुद्दामाथि सुनुवाइ
दश बर्षअघिको मूल्य अभिबृद्धि र आय कर सम्बन्धि विवादको सुनुवाइ आइतबारबाट सर्बोच्च अदालतमा सुरु भएको छ।
जाडो बढेपछि विजुलीको माग ह्वात्तै बढ्यो, झ्याप्प झ्याप्प लाइनका काटिँदा के गर्दैछन् कुलमान ?
देशभर चिसो बढेका कारण बिजुलीको माग ह्वात्तै बढ्दा काठमाडौं उपत्यका लगायत प्रमुख शहरी क्षेत्रमा विद्युत् व्यवस्थापन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई समस्या देखिएको छ ।
आईएमई को – अपरेटिभद्वारा ४७ आमालाई न्यानो कपडा वितरण
आईएमई को – अपरेटिभ सर्भिस लिीमटेड ४५ जान आमाहरुलाई न्यानो कपडा वितरण गरेको छ ।
आगामी फागुनपछि देशले नयाँ अर्थमन्त्री पाउने भएको छ । अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल पूरा हुने भएकोले नयाँ अर्थमन्त्री हुने करिब पक्का छ ।
प्रहरी नायव निरीक्षक र जवानविरुद्ध भ्रष्टचारको मुद्धा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५० हजार घुस लिएको आरोपमा प्रहरी नायव निरीक्षक राजेशकुमार सिंह र प्रहरी जवान मनोजकुमार यादवविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्धा दायर गरेको छ ।
प्रिमियर इन्स्योरेन्सको सीईओमा विश्वराम तिमिला, बीमा क्षेत्रमा ४ दशकको अनुभव
प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा विश्वराम तिमिला नियुक्त भएका छन् । तिमिलाको नियुक्ती बीमा समितिले बिहीबार स्वीकार गरेको हो । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले स्वीकार गरेपछि मात्रै नियुक्तिले बैधता पाउँछ ।
झापा बजार जोड्ने अमरपथ सडकखण्ड निर्माण हुँदै, ५७ करोड बजेट विनियोजन
झापाको पुरानो सदरमुकाम झापा बजार जोड्ने अमरपथ सडकखण्ड निर्माण कार्य शुरु भएको छ । कनकाई नगरपालिकाको सुरुङ्गादेखि दक्षिण १६ किलोमिटर झापा गाउँपालिका जोड्ने अमरपथ सडकखण्डको निर्माणकार्य शुरु भएको हो ।
भारतीय आइसिआइसिआइ बैंक नेपाल आउन स्वीकृति पायो, कार्यालय प्रमुखमा थापालाई नियुक्त गर्दै
भारतीय निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो बैंक आइसिआइसिआइ बैंक नेपाल आउने भएको छ। बैंकले नेपाल प्रतिनिधि कार्यालय खोल्नका लागि राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि लिइसकेको छ।
झापामा ४ अर्ब लगानीमा ३ सय शैयाको क्यान्सर अस्पताल, अब धाउनुपर्दैन काठमाडौं-भारत
करिब ४ अर्ब लगानीमा झापाका बिर्तामोडमा ३ सय शैयाको क्यान्सर अस्पताला संचालनमा आएको छ । पूर्वाञ्चलका क्यान्सर बिरामीलाई लक्षित गर्दै बिर्तामोडमा पुर्वान्चल क्यान्सर अस्पताल बुधबारदेखि संचालनमा आएको हो ।
पाँचबुँदे प्रतिवद्धता पत्र जारी गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको आन्दोलन फिर्ता
निर्माण व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल निमाण व्यवसायी महासंघले आन्दोलन फिर्ता लिएको छ । महासंघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दालनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएको बताएको हो ।
भ्रमण वर्ष २०२० मा लाखौं पर्यटकलाई स्वागत गर्दैछौंः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा नेपालमा लाखौं पर्यटक ल्याउने बताएका छन् । शुभकामना सन्देशमा केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्, ‘हामी नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा समेत मनाउँदै लाखौं पर्यटकलाई नेपालमा स्वागत गर्दैछौं ।’
एनसेलले २३ करोड ब्याजसहित साढे चार अर्ब कर बुझायो, बाँकी तिर्न किस्ता सुविधा माग गर्यो
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एनसेलले कुल कर निर्धारणको करिव २० प्रतिशत मंगलबार भुक्तान गरेको छ। एनसेलले ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर सरकारलाई बुझाएको हो।
नाडाको उपाध्यक्षमा करण चौधरी चयन, संभवत सबैभन्दा कान्छो पदाधिकारी, तीन सदस्य थपिए
सवारीसाधनहरूका आधिकारिक बिक्रेताहरूको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन नेपालको उपाध्यक्षमा करण चौधरी चयन भएका छन्। नाडाको विधान अनुसार उपाध्यक्ष मनोनित पद हो।
माम्खा मावि लाई ६ लाख बराबरको पुस्तकालय
चिशंखुगढी गाउपालिका ८ माम्खा स्थित श्री माम्खा माविमा पुस्तकालय स्थापना गरिएको छ । ओखलढुंगा पर्यटनका अध्यक्ष समाजसेवी तथा नेपाली कांग्रेसका नेता लिला बल्लदभ दाहाल (काका) को सहयोगमा विकल्पका लागि आवाज नेपालले पुस्तकालय स्थापना गरेको हो ।
६५ अर्ब लगानीको ‘माथिल्लो त्रिशुली ए’को निर्माण आगामी बैशाखदेखि शुरु हुने
माथिल्लो त्रिशूली एक जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन मार्ग प्रशस्त भएपछि आगामी नयाँ वर्षदेखि निर्माण शुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
कर्मचारीलाई पर्यटनमन्त्रीको चेतावनी– हडतालबाट क्षति भए संलग्नबाटै क्षतिपूर्ति भराउँछौं
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति हुने गरी कुनै गतिविधि भए त्यसमा संलग्नबाटै क्षतिपूर्ति भराइने चेतावनी दिएका छन ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सुदूरपश्चिमका नेताहरु समृद्ध भएको, तर जनता समृद्ध हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
२०७७ असारमा मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलसम्म आउने, उपत्यकाबासीले कहिले पिउन पाउलान् ?
मेलम्चीे खानेपानी आयोजनाको काम २०७७ असार मसान्तसम्म पुरा हुने भएको छ । आयोजनाको रुग्ण रहेको सम्पुर्ण काम सकेर आगामी असारभित्रै मेलम्चीको पानी सुन्दरीजल ल्याउने आयोजना प्रमुख तिरेशप्रसाद खत्रीले बताएका छन् ।
धितोपत्र बोर्डमा अन्तर्वार्ता, अन्तिम सूचीका पाँचमध्ये तीन सिफारिस हुँदै, को होलान् अध्यक्ष ?
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि सोमबार अन्तर्वार्ता हुने भएको छ । छनोटमा परेका पाँचजना उम्मेदवारको सोमबार अन्तर्वार्ता हुने भएको हो ।